မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ သတင်းစာရှင်းလင်းချက် – Myanmar Peace Monitor
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ သတင်းစာရှင်းလင်းချက်
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး သတင်းစာရှင်းလင်းစဉ်(MNA)
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ၇၂ ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အယ်ဒီတာ ဗညားအောင်နှင့် အခြားသတင်းထောက်တို့၏မေးမြန်းချက်များအား မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်အောင်မင်း ဖြေကြားခဲ့သည်ကို စုစည်းတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေး- NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေးအရ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲ?
ဖြေ-မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ၂၀၁၈ မှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကတည်းက ကျနော်တို့ မွန်တိုင်းရင်းသား အကြား ညီညွတ်ရေးတည်ဆောက်ခဲ့တာက တစ်ခု၊ နောက်ဒုတိယအပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး တွေ့ဆုံပြီး အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြတာရှိတယ်၊ နောက်တတိယအပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ပါတီ ရွယ်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံအဖြေရှာရေး ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ ပင်လုံညီလာခံကို တက်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်စတုတ္တအပိုင်းမှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနဲ့ မရေးထိုးသေးတဲ့ ဘဝတူတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမလဲ ဆိုတာကို ဆက်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ မိမိအမျိုးသားရေးမှာ မိမိပြည်သူလူထုအပိုင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီအပိုင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် မဟာမိတ်အပိုင်းနဲ့ အစိုးရ/တပ်မတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအပိုင်းတွေ ရှိပါတယ်။
မေး-လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပါသလဲ?
လက်ရှိ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေတဲ့ အပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာ ညီညွတ်မှုတွေ ပြိုကွဲနေတယ်၊ ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းကြား၊ ဗမာလူမျိုးနဲ့ တိုင်ရင်းသားအကြား၊ ဗမာအချင်းချင်းညီညွတ်ရေးမှာ ဆိုရင် “အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး” ဆိုပြီး အစိုးရနဲ့တပ်မတော် ညီညွတ်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်၊ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ ပြည်သူလူထုကြားမှာ အထိုက်အလျောက်ညီညွတ်ပေမယ့်လည်း တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူကြားမှာတော့ အလှမ်းဝေးသေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ညီညွတ်မှုအဆင့်တဆင့်ကို ရရှိပြီးမှပဲ နိုင်ငံရေးအရ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ အမျိုးသားရေးအခွင့်အရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်၊ အားလုံးပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မွန်ပြည်သစ်မျှော်မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာသေးပါဘူး၊ လက်ရှိအခြေအနေဟာ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ဘယ်လောက်ပဲဆိုဆို ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ၅၀% အထက်မရောက်ရှိသေးပါဘူး။
မေး-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေ ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်သလဲ?
ဖြေ-အဓိက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီး မွန်ပြည်သစ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို အမြန်ဆုံးအဖြေရှာနိုင်မှသာ သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှာပါ၊ လက်ရှိအနေအထားမှာ စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးလိုလိုဟာ အစိုးရကနေတဆင့်ဖြတ်သန်းနေရတာပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ အချို့ကုမ္ပဏီအနည်းအကျဉ်းတွေလောက်သာ ကျနော်တို့ဆီ ဆက်သွယ်လာတာရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဒေသရဲ့စီးပွားရေးအနေထားမှာ ဥပမာအားဖြင့် ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုဟာမျိုးဆိုရင် အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက အများအားဖြင့် သူတို့ကြိုတင်လက်ဦးမှုတွေ ရယူထားတားမျိုးတွေ့ရပါတယ်၊ မွန်ပြည်သစ်အနေနဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်း အရင်တွေကလိုပဲ အနည်းအကျဉ်းပဲဆောင်ရွက်နေတာဆိုတော့ ထိရောက်မှုမရှိပါဘူး၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘဲနဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကို ဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူး၊ ရနိုင်မှာလည်းမဟုတ်သလို အလုပ်ဖြစ်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘဲနဲ့ မွန်ပြည်သစ်အနေနဲ့က ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ စီးပွားရေးကိစ္စတွေကို သိပ်ပြီး အာရုံမထားနိုင်ပါဘူး။
မေး-NCA အပေါ် ဘယ်လောက်မျှော်လင့်စရာရှိသေးလဲ?
NCA အပေါ် ဘယ်လောက်မျှော်လင့်သလဲဆိုတော့ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ NCA လမ်းကြောင်းတစ်ပေါက်ပဲ ပွင့်နေတာပါ။ အခြားလမ်းကြောင်း မတွေ့သေးပါဘူး၊ ဒီတော့ ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ ရပ်တည်နေရတယ်၊ ရှေ့ဆက်လို့မရသည့်တိုင်အောင် ဒီလမ်းကြောင်းကနေပဲ ဆက်ပြီးတိုးတိုးသွားနေရတာပါ၊ ရှေ့မှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအထာအထိ မျှော်မှန်းရမလဲ ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက် အစိုးရ၊ တပ်မတော်ဘက်နေ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို လမ်းကြောင်း ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ဖွင့်ပေးသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်၊ နိုင်ငံရေးအားဖြင့် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ အပေးအယူရှိကြမလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်၊ အဲဒီအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့အထိ စစ်တိုင်း(၅) တိုင်းမှာ တပ်မတော်အပစ်ရပ်ကြေညာထားပေမယ့်လည်း ဒီနေ့အထိ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု မရှိသေးပါဘူး၊ အလွတ်သဘောတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ NCA ဟာ လတ်တလောမှာ ရပ်တန့်နေတယ်၊ ရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုတာ ဝိုးတိုးဝါးတား ဖြစ်နေတယ်၊ တပ်မတော်အနေနဲ့လည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေတံတိုင်းကြီးနဲ့ သူတို့အကျိုးစီးပွားကို ဆက်လက်အကာအကွယ်ပြုထားနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ NCA လမ်းကြောင်းကလွဲပြီး တခြားလမ်းကြောင်းကို ဖွင့်ပေးလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မေး- လက်ရှိ NLD ရဲ့ ၂၀၀၈ ပြင်ဆင်ရေးကလည်း ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ?
ဖြေ- ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို NLD အခုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ပထမ ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဖွဲ့မယ်၊ နောက် ဘယ်အချက်တွေပြင်မယ်ဆိုတာကို လွှတ်တော်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ အဆင့်ဆင့်လာပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် တပ်မတော်လက်မခံရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ကိုင်လှုပ်လို့ရနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ပြင်ဖို့ တပ်မတော်လက်မခံခဲ့ရင်တော့ NLD အစိုးရသက်တမ်း ၅ နှစ်အတွင်းမှာ ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဘယ်အချက်တွေကိုပြင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းတစ်ခု ကျန်ရစ်ကောင်းကျန်ရစ်ပါလိမ့်မယ်။ တဖက်မှာတပ်မတော်ဘက်က ၂၀၀၈ အနှစ်သာရကို မထိခိုက်စေဖို့ ပြောထားတယ်၊ တကယ့်အနှစ်သာရဆိုတာက ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီလိုလားနေကြပီး တိုင်းရင်းသားတွေက ဖက်ဒရယ်ကို တောင်းဆိုနေတယ်၊ ကျနော်တို့အနှစ်သာရက အဲဒီလိုပါ၊ တပ်မတော်ဘက်ကတော့ ဒီအနှစ်သာရတွေကို ချက်ချင်းပေးလို့မဖြစ်သေးဘူး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနဲ့ လွှတ်တော်မှာပါဝင်နေတဲ့ သူတို့အချိုးအစားတွေကို တဆင့်ချင်းဆီလျော့သွားမယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အနှစ်သာရဆိုတာက တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုနေပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အခုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟာလည်း လက်ရှိ NCA လိုပဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
မေး- ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံအလားအလာ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ?
ဖြေ-၂၁ ရာစုပင်လုံရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆိုတာက သူတို့(အစိုးရ/တပ်မတော်) ရဲ့ ပင်လုံစိတ်ဓါတ် သဘောထားမှာ တည်နေတယ်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် သဘောတူညီချက် ကတိကဝတ်တွေကို သူတို့လစ်လျူရှုတဲ့သဘောနဲ့ ၂၁ ပင်လုံကို လုပ်တာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီတော့ ၂၁ ပင်လုံကိုသွားမယ်ဆိုတာရင် လောလောဆယ်နိုင်ငံရေးအရ တိုင်းရင်းသား၊ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်မှာ အဆင့်ဆင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်၊ ဥပမာ ပထမအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံသဘောတူညီချက်ထဲမှာဆိုရင် “ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ဖို့” ဆိုတာပါတယ် ။ NLD ရဲ့ ၂၀၀၈ ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီဖွဲ့တယ်၊ နိုင်ငံရေးအရ ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ကို အခြေခံပြီးတော့ “ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ” အခြေခံမူရမယ် ဆိုတဲ့သဘော။
မေး- မွန်ပြည်သစ်အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကို လက်ခံထားသလဲ?
ဖြေ-ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကို လောလောဆယ် ကျနော်တို့မွန်ပြည်သစ်လက်ခံထားတယ်ဆိုတာက ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းပွင့်ဖို့ပါ၊ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်နဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီက အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် သိပ်ပြီးထူးခြားမှုမရှိဘူ့းလို့ ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ဒီမိုကရေစီကိုဦးစားပေးမလား၊ ဖက်ဒရယ်ကို ဦးစားပေးမလားပေါ့၊ ကျနော်တို့ကတော့ ဒီ ၂ ခုလုံးကိုပြိုင်ပြီး အဓိကထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ယာယီလက်ခံထားတာဖြစ်တယ်။
Staff February 25, 2019 February 25, 2019 Interviews No Comments
← ခြေဥ ပြင်ဆင်ရေး ကျိုက်ထိုဒေသခံ ၂၀၀ ကျော် ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲပြုလုပ်